पैसा ब´चतकाे लागी यी दैनिक साधारण बा´नीहरू अपनाउनुहाेस् – Butwal Sandesh
पैसा ब´चतकाे लागी यी दैनिक साधारण बा´नीहरू अपनाउनुहाेस्
आफ्नाे दैनिक जिवन निर्वाह गर्न र आफ्ना सपनाहरूलाइ आकार दिन पैसाकाे आवश्यकता पर्छ । आफुसँग भएकाे बेलामा खर्च गर्दा र समय आउँदा टर्छ भन्रे बानीले हामीलाइ आवश्यक परेकाे बेलामा आर्थिक अभावमा डुब्छाैँ । त्यसैले यहाँ पैसा बचत गर्ने बानीकाे विकासकाे लागी केही सामान्य उपायहरू उल्लेख गरिएकाे छः
-सामान किनमेल गर्न जानुअगाडी आफुलाइ आवश्यक रहेका कुराहरूकाे लिस्ट बनाउनुहाेस् ।
-बजारमा किनमेल गर्दा पहिला आफुलाइ आवश्यक परेका कुराहरू मात्र खरिद गर्नुहाेस् । पैसा बच्याे भने मात्र ति बाहेकका कुरा किन्रेबारे साेच्नुहाेस् ।
-घरमा खुत्रुके राख्नुहाेस् ।
-सामानकाे भाउ घटाएर किन्रुभाे भने त्याे छुट पाएकाे पैसा खुत्रुकेमा राख्नुहाेस् ।
-दक्षिणा आउने पैसा खुत्रुकेमा जम्मा गर्नुहाेस् ।
-एक रूपियाँकाे सिक्काकाे महत्व पनि धेरै हुन्छ । सिक्का पैसाहरू खुत्रुकेमा राख्ने गर्नुहाेस् ।
-कसैलाइ उपहार दिँदा पुस्तक, कलम उपहार दिनुहाेस् । यसले तपाइकाे पैसा पनि केही बच्छ भने पठन सँस्कृतिकाे पनि विकास हुन्छ।
-बजारकाे हल्ला पछाडी हिड्नुभन्दा त्याे सामानबारे राम्ररी जानकारी लिएर मात्र खरिद गर्नुहाेस् ।
-‘सेल’ मा राखेका सामान वा सस्ताेमा सामान पाइयाे भन्दैमा तत्काल आवश्यक नभएकाे सामान खरिद नगर्नुहाेस् ।
-आफ्नाे आम्दानी र खर्चकाे लेखाजाेखा गर्ने बानी बसाल्नुहाेस् ।
-यदि तपाइ विधार्थी हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नाे घरकाे आम्दानीकाे स्राेत, खर्च, आर्थीक व्यवस्थापन आदिकाे बारेमा जानकार रहनुहाेस् ।
-धुम्रपान र मधपान गर्न छाेड्नुहाेस् ।
-बाहिरकाे खाना र जँक फुड छाेडेर घरकाे खाना खाने गर्नुहाेस् ।
किन गर्ने बचत ? कसरी बसाल्ने बचत गर्ने बानी ?
प्रारम्भिक कालमा बिना पैसा विनिमय हुने भएको भएतापनि अबको अर्थतन्त्रमा पैसा बिना विनिमय असम्भव भइसकेको छ । वर्तमान समयमा प्रत्येक आर्थिक कारोबार मुद्रामा नै हुने हुँदा पैसालाई बृद्धिमतापूर्ण तरिकाले परिचालन गर्न सक्ने मानिस नै धनी हुँदै गइरहेका छन् । आम्दानीको सबै मात्रा खर्च गरेर हुँदैन, केही भाग बचत पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ । वर्तमानको आम्दानीबाट भविष्यको लागि केही रकम छुट्याएर राखिन्छ भने त्यसलाई बचत भनिन्छ ।
अर्थतन्त्रको बृद्धिलाई उकास्न बचत नभई नहुने तत्व हो । किनकि बचत लगानीको स्रोत र अवसर दुबै हो । हामी सबैलाई थाहा छ कि बचत गर्नु भनेको जटिल कार्य हो । कुनै चिज बस्तुमा गरिने खर्च कटौती गरेर सञ्चित गर्नु भनेको बचत गर्नु हो । यसमा उपभोक्ताले त्याग गरेको हुन्छ । अनावश्यक चिज कटौती गरेर भविष्यको लागि सञ्चिति गरिने बचत वित्तीय अनुशासन पनि हो ।
एउटा ब्यक्तिले बचत दुई किसिमबाट गर्न सक्दछ । पहिलो, आम्दानीको केही भाग छुट्याएर र दोश्रो, खर्च कटौती गरेर । खर्च कटौती भन्नाले बस्तु तथा सेवाको भइरहेको उपभोगमा कटौती गर्ने होइन । बरु तीनै बस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने समयमै सपिङ्गमलमा केही ध्यान पुर्याउन सकेमा सँधै भुक्तानी गरिरहेको बिल रकममा केही पैसा कटौती भई बचत हुन जान्छ ।
उदाहरणका लागि बजारमा बस्तु तथा सेवाको पैसा भुक्तानी गर्दा मोलमलाई गर्नु, केही छुट सुविधा छ कि भनेर सेल्समा सोध्नु, नयाँ अफरको बारेमा बुझ्नु, बाइ वान गेट वान जस्ता स्किमका बारेमा थाहा पाउनु, महङ्गो बस्तु तथा सेवा खरिद गर्नु भन्दा पहिला दश मिनेट सोच्नु, सामानको तालिका बनाएर मात्र सपिङ्ग गर्नु, बिल लिन नछुटाउनु, कार्डबाट भुक्तानी गर्दा केही सुविधा छ कि भनेर काउन्टरमा प्रश्न गर्नु जस्ता बानीले एउटा सचेत उपभोक्ताको पहिचान हुनुका साथै ब्यक्तिगत तथा पारिवारिक बचतमा थप बल पुग्न गई सन्तृष्टि प्राप्त हुन्छ ।
बचत के का लागि गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । जस्तै, भविष्यमा आइपर्ने आकस्मिक वित्तीय जोखिमलाई सजिलै पार लगाउन, अवकास पछिको जीवनको लागि, आम्दानी कम भएको समयमा खर्च धान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारका लागि, विबाह, सामाजिक रितीरिवाज मान्न, व्यवसाय संचालन गर्न स्वः पूंजीको लागि, भ्रमण, सामाजिक सुरक्षा, स्तरीय जीवन जीउन, बिलासीलताका सामान खरीद गर्न, बैदेशिक रोजगारीमा जान, घरजग्गा निर्माण/खरीद/मर्मत गर्न, उपहार दिन, सवारी साधन खरीद गर्न, कर्जाको सांवा ब्याज भुक्तानी गर्न, लगानी गर्न आदि प्रयोजनको लागि बचतको उपयोग भविष्यमा गर्न सकिन्छ ।
हामी सबै बचत गर्न चाहन्छौं तर वास्तवमा यो कसरी सम्भब हुन्छ ? के हाम्रो आवश्यकता र इच्छाहरु आम्दानीले पुरा गर्न सक्दछ त ? ब्यक्तिका आवश्यकता र चाहना असिमित हुने गर्दछन्, आफुसँग भएको सिमित पैसाले ती असीमित आवश्यकता र चाहनालाई पूर्ती गर्न मानिस रातदिन कमाउनका लागि परिश्रम गरिरहेको हुन्छ ।
आवश्यकता र चाहनाका लागि गर्ने खर्चको तालमेल मिलाउन नजानेर सँधै मानिस अभाव जस्तो महशुस गरिरहेकोे हुन्छ । सामान्यतया, आफ्नो आम्दानीको २० प्रतिशत बचत गर्ने र ८० प्रतिशतको खर्च भित्र बस्ने बानी बसाउन सक्नु पर्दछ । ८० प्रतिशत खर्च मध्ये पनि ५० प्रतिशत आवश्यकता पुर्तीका लागि र ३० प्रतिशत चाहना पुर्तीका लागि खर्च गर्ने बानी बसालेमा हैसियतकै जीवनस्तर ब्यतीत भई नियमित रूपमा बचत गर्ने बानीको बिकास हुन्छ ।
बचत गर्न सकिएन भनेर कदापि चिन्तित हुनु हुँदैन । बरु आफ्नो चेतना स्तरको सदुपयोग भरपुर गरिनुपर्दछ । बचत गर्न सबैभन्दा पहिला, आकस्मिक कोषको लागि बचत गर्ने, दोश्रो, उच्च ब्याजदरका ऋण घटाउने, तेस्रो, अवकास पछिको जीवनका लागि रकम जम्मा गरि राख्ने र चौथो, सावधिक जीवन बीमा गर्ने गरेमा वर्तमान तथा भविष्य सँधै सुरक्षित र सुन्दर भइरहने हुन्छ ।
हामीले दैनिक जीवन ब्यतित गरिरहदा थोरै कुरामा मात्र सचेतना अपनाउन सकियो भने पनि आफ्नो आर्थिक स्थिती सुधार भएर जानेछ। वर्तमानमा असल कार्य गरियो भने भविश्य सुरक्षित हुन्छ जस्तै धुम्रमान, मदिरापन नगर्ने, आवश्यक नभएको समयमा टिभि, रेडियो, बत्ति, म्युजिक सिस्टम जस्ता इलेक्ट्रोनिक सामाग्री बन्द गर्ने, घरमा भएका पुराना तथा अनावश्यक बस्तुहरु बिक्री गरिदिने, आवश्यक पर्न सक्ने बिग्रीएका बस्तुहरु तथा कपडाहरु तालिका बनाएर मर्मत गर्ने, खरिद छुट पाएको बेलामा ठूलो मात्रामा सामान उठाउने, तयारी खानेकुरा धेरै नखाने, नियमित योग गर्ने, पानी नियमित पिउने, तनाब नलिने, वार्षिक रुपमा शुल्क बुझाइरहनु पर्ने तर प्रयोग गर्न नभ्याउने संस्थाको कार्ड नविकरण नगर्ने, दराजबाट नलगाउने कपडाहरु हटाउने, लगाउने कपडा मात्र खरीद गर्ने, आफुले प्रयोग गरेर खाली भएको कोठा, फ्ल्याट भाडामा दिने जस्ता सामान्य बानीले हाम्रो बचत बढाउँछ ।
साथमा एउटा नोटबुक सँधै साथमा लिने गर्नुहोस्, ताकि महत्वपूर्ण र लाभदायिक जानकारी नोट गर्न पाइयोस् ।त्यस्तै, आफुले नोकरी गर्ने कम्पनीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधाको बारेमा जानकारी राख्नुहोस् । सकेसम्म सुरक्षित र ब्याजदर बढि दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नुहोस् ।
क्रेडिट कार्डको अधिक प्रयोग नगर्नुहोस् । बैंकले प्रदान गर्ने मोवाइल बैकिङ्ग सुविधाको अधिक प्रयोग गर्नुहोस् । सकेसम्म नगदमा कारोबार नगर्नुहोस् । यसबाहेक, आर्थिक कारोबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुहोस् । सपिङ्ग बिल, स्कुल र कलेजको बिल, मोवाइलको बिल, बत्ती, पानीको बिलको नियमित मासिक रुपमा अध्ययन गर्ने र छुटको समय भित्रै भुक्तानी गर्ने, भएको खर्चको तालिका बनाउने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, बजेट बनाउने, बचतको लागि योजना बनाउने, दैनिक वा साप्ताहिक वा मासिक रुपमा नियमित बचत गर्ने र बचत बृद्धिको विश्लेषण गर्ने लगायतका बानी बसाउनाले तपाईँको बचत वृद्धिमा ठूलो मद्दत पुर्याउँछ ।
त्यसैगरी, आफन्त, साथीभाई तथा छिमेकीसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिराख्नुहोस ता कि आवश्यक परेको बेलामा सहयोग लिन र दिन सकियोस् । आफुसँग भएको पैसालाई सुरक्षित र भरपर्दो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर जम्मा गरी वित्तीय सेवाको प्रयोगमा जोड दिने गरौं । नगदमा कारोबार नगर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र कारोबार गर्ने बानीले छलकपट, जालसाझीं र ठगीआदि बाट बच्न सकिन्छ ।
घरमा पैसा राख्दा च्यातीने, चोरी हुने, हराउने, डढ्ने, मैला हुने, ज्यानमा जोखिम हुने, तनाब आउने, फजुल खर्च गर्न मन लाग्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, अनावश्यक विचार आउने जस्ता जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्दा निश्चित प्रतिशत नियमित रुपमा ब्याज आउनुका साथै सुरक्षित पनि भईन्छ ।
सामान्यतया, बचत गर्नको लागि दुईवटा नियममा बांधिनु आवश्यक हुन्छ । पहिलो जति कमाउनु हुन्छ त्यो भन्दा कम खर्च गर्नु पर्दछ अर्थात आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल हुनु पर्दछ । जति बढि आम्दानी गरिन्छ त्यतीनै अनुपातमा बचत गर्दै जानु पर्दछ मतलब ठूलो आम्दानी ठूलै बचत ।
दोश्रो बचत गर्ने आदतको बिकास अर्थात हरेक दिन वा सप्ताह वा मासीक रुपमा नियमित रुपमा बचत गर्ने बानी बनाउनु पर्दछ । समय समयमा आफुले गरिरहेको बचत बृद्धिको श्रृंखलालाई चार्टमा अभिब्यक्त गरेर हेर्नुहोस् जसबाट तपाईले आफ्नो समृद्धिको प्रतिबिम्ब देख्नुहुनेछ र भविष्यमा आर्थिक सन्तृष्टि प्राप्त गर्नुहुनेछ ।